Fambolem-bary : harenina ny vahilava manerana ny sompitr’i Madagasikara | NewsMada
Mihena ny voka-bary re­hefa tsy voakojakoja ny tohodrano, ny vahilava, ny lakan-drano manondraka ny tanimbary. Maro amin’izy ireny no efa simba ampolo taona maro, toy ny any Alaotra, sompitr’i Madagasikara voalohany sy ny any Marovoay, sompitra faharoa, ohatra.
Nanapa-kevitra ny fanjakana fa harenina ny vahilava amin’izy ireny. Nomena an­draikitra ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana ary ny jono (Maep) amin’ny fa­maritana sy mijery ny fandaniam-bola ary ny fanatanterahana ny asa. Notsindriana manokana kosa anefa fa tsy maintsy mialoha ny fiavian’ny orana no hanaovana izany. Hatreto, tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Maep, efa nilatsaka anefa
ny rotsak’orana voalohany. Amin’ny ankapobeny, ny fiandohan’ny volana desambra ny tena fiavian’ny orana sy fotoam-pahavaratra.
30.000 ha tsy afaka ambolena ny any Alaotra
Manomboka ny volana janoary kosa ny tena fanombohan’ny fikarakarana ny ta­nimbary, hiatrahena ny fo­toam-pambolena. Anisan’ny tena tsy ampy rano ny any Alaotra efa an-taona maro, ny any amin’ny faritra PC 15, ny PC 23 any amin’ny tapany atsimon’ny Farihy (kaominina Morarano) ary ny any amin’ny PC avaratra. Mitotaly 30.000 ha ireo velarana ireo. Maro ny tetikasa fanajariana ny lemaka any an-toerana, saingy tsy tena voavaha ny olana.
Saika tsy nisy fikojakojana mihitsy kosa ny any amin’ny lemak’i Marovoay, tato anatin’ny 40 taona. Koa, andrasana ny asa mivaingana hataon’ny Maep amin’ity toromariky ny fanjakana foibe ity, hanarenana ireo vahilava rehetra any amin’ny sompitr’i Madagasi­kara. Ankoatra ny any Alaotra sy Marovoay, sompitra mpamokatra vary koa ny any Andapa, Bealalana, Moron­dava, sns.